Tongasoa eto amin'ny WoopShop.com. Raha mizaha na mividy amin'ny WoopShop.com ianao dia voaro sy hajaina ny fiainanao manokana sy ny mombamomba anao. WoopShop.com dia manolotra serivisy tsara indrindra ho anao raha manaraka ny fanamarihana, ny fepetra ary ny fepetra voalaza eto amin'ity pejy ity.
• WoopShop.com manaja ny tsiambaratelon'ny mpitsidika tsirairay na mpanjifa ny tranokala ary ataovy am-pitandremana ny fiarovana anao an-tserasera.
• WoopShop.com manangona ny fampahalalana dia misy ny mailakao, anaranao, anaran'ny orinasa, adiresy an-dalambe, kaodim-paositra, tanàn-dehibe, tanindrazana, nomeraon-telefaona, tenimiafina sns, hanombohana azy dia mampiasa cookies izay ilaina izahay hanangonana sy hanangonana tsy- fampahalalana azo fantarina manokana momba ireo mpitsidika ny tranokalanay. Tsy manam-paharoa aminao ny fampahalalana. Na izany aza, ny mpampiasa dia mety mitsidika ny tranokalanay amin'ny fomba tsy fantatra anarana. Hanangona ny mombamomba ny mombamomba anay manokana avy amin'ny mpampiasa izahay raha toa ka manolotra an-tsitrapo izany fampahalalana izany aminay. Ny mpampiasa dia afaka mandà tsy hanome fampahalalana momba ny tena manokana, afa-tsy ny manakana azy ireo tsy hanao hetsika mifandraika amin'ny tranonkala sasany.
• Azontsika atao ny manangona fampahalalana momba azy manokana avy amin'ny mpampiasa amin'ny fomba isan-karazany, ao anatin'izany, fa tsy ferana, rehefa mitsidika ny tranokalanay ny mpampiasa, misoratra anarana amin'ilay tranokala, mametraka baiko, mamaly amin'ny fanadihadiana, mameno endrika, ary mifandraika miaraka amin'ny hetsika, serivisy, endrika na loharano hafa ampiasainay ho an'ny tranokalanay. Mety angatahina ny mpampiasa, raha ilaina, anarana, adiresy mailaka, adiresy mailaka.
• Mampiasa ny vaovao izahay hanampiana anay hanamora kokoa ny fampiasanao, hamaliana ny fangatahana na fitarainana, hanampiana anay haneho ny tena manan-danja indrindra aminao ary hampahatsiahy anao vaovao vaovao, vokatra misy varotra, tapakila, fampiroboroboana manokana on.
• Mandritra ny fisoratanao anarana dia hahazo bitsika ianao hanome anay ny anaranao, fandefasana ary ny adiresy faktiora, ny nomeraon-telefaona ary ny adiresy mailakao. Ireo karazana mombamomba anao manokana dia ampiasaina amin'ny tanjona faktiora, hanatanterahana ny baikoo. Raha manana olana izahay amin'ny fikarakarana ny kaontinao, dia azonay atao ny mampiasa ny mombamomba anao izay omenao mba hifandraisana aminao.
• Afaka misoratra anarana ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny rohy amin'ny alàlan'ny mailaka mailaka na ny famandrihana anao rehefa avy tafiditra.
• Afaka manangona vaovao tsy fantatra momba ny mpampiasa izahay isaky ny mifanerasera amin'ny tranokalanay. Ny fampahalalana tsy miankina amin'ny tena manokana dia mety ahitana ny anaran'ny mpizaha, ny karazana solosaina ary ny fampahalalana ara-teknika momba ny fampitan'ny mpampiasa ny tranokalanay, toy ny rafitra fiasa sy ireo mpanome tolotra Internet ampiasaina ary fampahalalana mitovy amin'izany.
• Ny tranokalanay dia mety hampiasa "cookies" hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa, azontsika atao koa ny mampiasa cookies avy amin'ny antoko fahatelo avy amin'ny Trustpilot na serivisy hafa. Ny tranokalan'ny mpampiasa dia mametraka cookies ao anaty kapila mafy ho an'ny fitahirizana rakitra ary indraindray hanarahana ny mombamomba azy ireo. Afaka misafidy ny hametraka ny tranokalan'izy ireo ny mpampiasa handà ny cookies na hampandrenesany anao rehefa alefa ny cookies. Raha manao izany izy ireo dia mariho fa ny faritra sasany amin'ilay tranokala dia mety tsy mandeha tsara.
• WoopShop manangona sy mampiasa ny mombamomba anao manokana ho an'ireo mpampiasa manaraka:
• Mandray fomba fanangonana, fitehirizana ary fanodinana angon-drakitra mifanaraka amin'izany izahay ary fepetra fiarovana mba hiarovana amin'ny fidirana tsy ara-dalàna, fanovana, famoahana na fanimbana ny mombamomba anao, solonanarana, tenimiafinao, fampahalalana momba ny fifanakalozana ary angon-drakitra voatahiry ao amin'ny tranokalanay.
• Izahay dia tsy mivarotra, mifanakalo, na manofa ny mombamomba ny mpampiasa manokana amin'ny hafa. Azontsika atao ny mizara fampahalalana momba ny demografika mitambatra izay tsy mifandray amin'ny fampahafantarana manokana momba ny mpitsidika sy ny mpampiasa amin'ireo mpiara-miasa aminay, ireo mpiara-miasa atokisana ary mpanao dokam-barotra ho an'ny tanjona voalaza etsy ambony. Azontsika atao ny mampiasa mpamatsy tolotra antoko fahatelo hanampiana anay hiasa amin'ny orinasantsika sy ny tranokala na hitantana ireo hetsika amin'ny anarantsika, toy ny fandefasana taratasim-baovao na fanadihadiana. Azontsika atao ny mizara ny mombamomba anao amin'ireto antoko fahatelo ireto ho an'ireo tanjona voafetra nomenao nomenao anay ny fahazoan-dàlana.
• Ireo mpampiasa dia mety mahita doka na atiny hafa ao amin'ny tranokalanay izay mampifandray amin'ireo tranokala sy serivisin'ireo mpiara-miombon'antoka, mpamatsy, mpanao dokam-barotra, mpanohana, mpanome alalana ary antoko fahatelo hafa anay. Izahay dia tsy mifehy ny atiny na rohy izay miseho amin'ireo tranokala ireo ary tsy tompon'andraikitra amin'ireo fomba fanao ampiasain'ny tranonkala mifandraika na avy amin'ny tranokalanay. Ankoatr'izay, ireo tranokala na serivisy ireo, ao anatin'izany ny atiny sy ny rohiny, dia mety miova hatrany. Ireo tranonkala sy serivisy ireo dia mety manana ny politikany manokana sy ny politikan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Ny fizahana sy ny fifaneraserana amin'ny tranokala hafa, ao anatin'izany ny tranokala izay misy rohy mankany amin'ny tranokalanay, dia iharan'ny fepetra sy politikan'ny tranokala manokana.
• Ity fehintsoratra momba ny tsiambaratelo ity dia manazava ny fomba fampiasana angona manokana amin'ny serivisy fandoavam-bola Apple (Apple pay). Ho fanampin'izay, tokony hamaky ny teny sy ny fepetra ao amin'ny Apple Pay ianao. Ny hetsika ataonao amin'ny alàlan'ny WoopShop dia tsy misy ifandraisany amin'ny Apple Inc.
• Manana fahendrena i WoopShop hanavao ity politika momba ny tsiambaratelo ity amin'ny fotoana rehetra. Manentana ny mpampiasa izahay hijery matetika ity pejy ity raha misy fiovana hahalalàna ny vaovao momba ny fomba anampiantsika amin'ny fiarovana ireo mombamomba anay manokana. Manaiky ianao ary manaiky fa anjaranao ny mandinika io politikan'ny tsiambaratelo io indraindray ary mahafantatra ny fanovana.
• Amin'ny fampiasana an'ity tranokala ity dia manondro ny fanekenao an'ity politika ity ianao. Raha tsy manaiky an'ity politika ity ianao dia aza mampiasa ny tranokalanay. Ny fitohizanao ny fampiasana ny tranokala aorian'ny fandefasana ny fanovana an'ity politika ity dia horaisina ho fanekenao ireo fanovana ireo.
• Raha manana fanontaniana momba ity Politika momba ny tsiambaratelo ity ianao, ny fomba fanao an'ity tranonkala ity, na ny fifandraisanao amin'ity tranonkala ity, azafady mifandraisa aminay amin'ny support@woopshop.com na info@woopshop.com
2. Fepetra sy fepetra
• Misolo tena sy manome antoka ianao fa 18 taona farafahakeliny na mitsidika ny tranokala eo ambany fanaraha-mason'ny ray aman-dreninao na ny mpiambina anao. Ianao irery no tompon'andraikitra amin'ny fidirana sy ny fampiasana an'ity tranokala ity na iza na iza mampiasa ny teny miafinao sy ny famantarana nomena anao tany am-piandohana raha toa ianao ka nanome alalana na tsia ny fampiasana an'ity tranonkala ity na tsia.
• WoopShop.com dia afaka mandefa avy amin'ny trano fanatobiana entana isan-karazany. Ho an'ny baiko manana entana mihoatra ny iray, azonay atao ny mizara ny baiko amin'ny fonosana maromaro arakaraka ny haavon'ny tahiry araka ny fiheveranay manokana. Misaotra anao amin'ny fahazoana.
• Afa-tsy izay omena anao any an-kafa amin'ity pejy ity na amin'ny tranokala, na inona na inona alefanao na alefanao amin'ny WoopShop.com, ao anatin'izany tsy misy fetra, hevitra, fahalalàna, teknika, fanontaniana, tsikera, fanehoan-kevitra, ary tolo-kevitra miaraka, dia hozaraina avokoa ny fanolorana amin'ny maha-tsy tsiambaratelo sy tsy ara-bola, ary amin'ny alàlan'ny fandefasana na fandefasana, dia manaiky ny hanafatra ny fidirana sy ny zon'ny IP rehetra mifandraika amin'izany ianao, manilika ny zon'olombelona toy ny zon'ny mpamorona amin'ny WoopShop.com tsy andoavam-bola ary WoopShop kosa dia tsy andoavam-bola.
• Tsy tokony hampiasa adiresy mailaka diso ianao, mody olon-kafa ankoatranao, na manodikodina ny WoopShop.com na ny antoko fahatelo momba ny niavian'ny fanolorana na ny atiny. WoopSHop.com dia mety, nefa tsy voatery hanala na hanitsy izay fandefasana ao anatin'izany ny hevitra na hevitra momba ny antony.
• Ny lahatsoratra rehetra, sary, sary na sary hafa, sary famantarana bokotra, rakipeo audio, logo, teny filamatra, anaran'ny varotra na rindrambaiko teny sy ny atiny hafa ao amin'ny tranonkalan'ny WoopShop.com miaraka, ny Atiny, dia an'i WoopShop.com na ny atiny mifanaraka aminy mpamatsy. Ny Zo rehetra tsy nomena mazava dia natolotry WoopShop.com. Enjehina amin'ny lalàna feno ny mpandika lalàna.
• Mariho azafady fa mety misy ny baiko sasany izay tsy azontsika ekena ary tsy maintsy foanana. Manaiky ny roa tonta fa aorian'ny fandefasana baiko dia ny fitaterana irery no andraikitry ny orinasa lozisialy ankolafy fahatelo. Mandritra io dingana io, ny fananana feno ny vokatra dia an'ny mpividy; ny trosa rehetra sy ny loza mety hitranga mandritra ny fitaterana dia entin'ny mpividy.
• WoopShop.com dia mety misy rohy mankamin'ny tranonkala hafa amin'ny Internet izay tompony sy ampiasain'ny antoko fahatelo. Ekenao fa ny WoopShop.com dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fiasan'ny na atiny miorina amin'ny na amin'ny alàlan'ny tranokala toy izany.
• Ny WoopShop.com dia manan-jo hanova ireo fepetra sy fepetra ireo amin'ny ho avy tsy misy fampandrenesana.